Madaxweyne Deni oo xilkii ka qaaday guddoonkii maxkamadda ciidamada iyo danbiyada culus – Radio Daljir
Madaxweyne Deni oo xilkii ka qaaday guddoonkii maxkamadda ciidamada iyo danbiyada culus
Janaayo 12, 2020 4:08 g 0
Madaxweynaha Dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa xilkii ka qaaday guddoonkii sare ee Maxkamada ciidamada iyo dambiyada culus ee Puntland, islamarkaana magacaabay lix garsoore oo cusub.
Wareegtada magacaabista garsoorayaasha cusub ayaa ku soo baxday Xeer Madaxweyne Lr.09 kuna taariikheysan 12 January, 2020 ayaa Guddoomiye Ku meel gaar ah loogu magacaabay Maxkamadda Sare ee Ciidamada qalabka sida iyo Danbiyada culus ee Dowladda Puntland.
G/Sare. Axmed Cabdi Bootaan ayaa madaxweynuhu si ku meel gaar ah ugu magacaabay Guddoomiyaha Maxkamadda Sare ee Ciidamada qalabka sida iyo Danbiyada Culus ee Dowladda Puntland.
Dhinaca kale, madaxweynuhu wuxuu xilka qaadis ku sameeyey Guddoonka iyo Garsoorayaal ka tirsan Maxkamadda kuwaasi oo kala ah
S/guuto. Siciid Abyan Cigaal Guddoomiye
G/sare. Maxamuud Nuur Muuse Guddoomiye ku-xigeen
G/sare. Aadan Xuseen Maxamed Garsoore
G/sare. Maxamed Aadan Jaamac Garsoore
G/sare. Cabdirisaaq Axmed Cali Garsoore
G/sare. Cabdifitaax Xaaji Aadan Garsoore
Xil-ka-qaadista guddoonka sare Maxkamada ciidamada ayuu madaxweynuhu ku sababeeyay Cabashooyinka taxanaha ah ee caddaalad-darro oo ka imanayay mas’uuliyiinta Dowladda qaarkood iyo dadweynaha Puntland iyo sidoo kale In dib-u-habeyn lagu sameeyo maxkamada.
Warka Fiidnimo iyo Fadxi Aadan Cismaan, Daljir Bossaso (dhegayso)
Muwaadiniinta Britain oo looga digay in ay u safraan qeybo ka mid ah Kenya (daawo)